Isan-karazany amin'ny iPhone | IPhone News (Pejy 10)
Ity fitaovana ity dia mitondra ny MagSafe avy amin'ny Macbook mankany amin'ny iPhone
Znaps dia fitaovana tsotra sy mora vidy izay hamadika ny tariby mandefitra ny iPhone ho lasa fomba MagSafe.
DockBar dia mpandefa fampiharana ho an'ny iPhone
Ity tweak ity dia manampy sidebar izay hiasa ho mpandefa fampiharana na aiza na aiza amin'ny iOS.
Ity tweak ity dia mahasoa tokoa ho an'ireo izay miverina tsy misy jailbreak noho ny antony sasany ary hamonjy antsika amin'ny fanavaozana izany.
Apple manakana ny Apple Music amin'ny iPods
Apple dia manamafy ny tsy fitoviana eo amin'ny Apple Music sy ny iPod Nano sy iPod Shuffle vaovao.
Apple sy Samsung dia manaiky hanafoana ny karatra SIM
Amin'ny ho avy tsy ho ela dia hanjavona ny karatra SIM ho lasa ampahany amin'ilay fitaovana, zavatra hahasoa ny mpampiasa rehetra
Apple dia namoaka fanambarana Apple Watch vaovao efatra
Apple dia nanangana fampielezan-kevitra miaraka amina doka vaovao efatra hanehoana amintsika izay zakan'ny Apple Watch.
Ahoana ny fomba fampidinana mozika amin'ny Apple Music mba hihainoana azy ivelan'ny Internet
Amin'ity fampianarana kely ity dia azonao atao ny misintona ny mozika tianao indrindra amin'ny Apple Music mba hihainoana azy na aiza na aiza tianao.
Ny iPhone 6, 10% mahery kokoa amin'ny lalao video noho ny Samsung Galaxy S6
GameBench dia mamoaka tatitra mampitaha ny Samsung Galaxy S6 sy iPhone 6 amin'ny fampisehoana sary.
Ny Mesh, lalao tsara hampiasana ny fahaizanao ara-tsaina
Ny Mesh dia mampifangaro piozila isa miaraka amin'ny estetika manaitra ho an'ny fahafinaretantsika
Ny App Store sy iTunes Store dia nijanona tsy niasa tany Gresy intsony noho ny krizy ara-bola
Ny fifehezana renivohitra izay mitranga any Gresy dia nahatonga ny serivisy toa ny iTunes Store, App Store ary PayPal tsy hiasa intsony.
Velox 2 Azo alaina amin'ny jailbreak iOS 8.4 ankehitriny
Ny tweak Velox 2 dia efa azo alaina ao amin'ny iOS 8.4 Jaibreak, azonao atao ny misintona azy avy ao amin'ny toerana anaovana BigBoss.
Firy ny iPhones mila ajanona ny bala AK-74?
Firy ny iPhones mila ajanona ny bala AK-74? Amin'ity horonantsary manaraka ity dia manana ny valiny ianao
Apple dia nanala ny "Fizarana an-trano" tamin'ny fahatongavan'i iOS 8.4
Tamin'ity indray mitoraka ity dia anjaran'ny asan'ny "Share at Home", Apple no nahatonga azy hanjavona tampoka noho ny fahatongavan'ny iOS 8.4, namoaka izany tamin'ny Apple TV.
Lisitry ny Tweaks mifanaraka amin'ny iOS 8.4 Jailbreak
Izahay dia mitondra anao ny lisitr'ireo tweaks feno indrindra mifanaraka amin'ny iOS 8.4 Jailbreak, aza adino iray akory noho ny iPhone News.
WhatsApp Beta ho an'ny iOS 9 dia mitondra vaovao mahaliana
Betsaka ny vaovao mahaliana izay entin'ny WhatsApp Beta ho an'ny iOS 9, raha vantany vao mialoha ny fandefasana iOS izy ireo.
Pacemaker, DJ marani-tsaina ho an'ny iPhone-nao
Miaraka amin'ny Pacemaker dia azonao atao ny manamboatra mixes be ho azy nefa tsy mandany fotoana amin'ny antsipiriany
Jailbreak amin'ny iOS 8.3 na Apple Music amin'ny iOS 8.4? Ny olana lehibe
Miaraka amin'ny fahatongavan'i Apple Music dia misy ny olana lehibe izay mety hahatonga ny maro handao ny iOS 8.3 sy ny Jailbreak, hifindra any amin'ny iOS 8.4.
Ny fanontana faharoa an'ny fakantsary hafanana FLIR dia tonga amin'ny iPhone
Manomboka anio dia tonga amin'ny iPhone-ntsika ny fanontana faharoa an'ity fitaovana ity, fakantsary mafana mifamatotra amin'ny iPhone.
Unicode 8.0 dia hitondra emoji vaovao 36 sy marika vaovao an'arivony avy amin'ny fiteny hafa
Unicode 8.0 dia hitondra emoji vaovao 36 ho antsika, ary mariky ny fiteny an'arivony maro toa ny sinoa, japoney, koreanina na ny fiteny Ivory Coast
Strava, ilay fampiharana lamaody eo amin'ireo bisikileta
Strava dia mametraka ny tenany ho safidy mahaliana indrindra ho an'ireo bisikileta sy mpihazakazaka rehetra
Raha te-hiditra horonantsary haingana ianao Combine Vid dia mamela anao hanao izany ao anatin'ny segondra vitsy
Tamin'ny WWDC farany teo dia nanolotra zavatra maro izay efa fantatsika i Apple. Izahay dia mampiseho anao ny lisitry ny zavatra rehetra antenain'i Apple hampijanonanao ny fampiasana ny anao
Apple namoaka ny typeface San Francisco
Apple dia namoaka tao amin'ny foibe mpamorona ny endritsoratra izay ampiasaina ao amin'ny Apple Watch ary ho tonga ao amin'ny El Capitan OS X sy iOS 9, San Francisco
Milanuncios dia nandefa ny fampiharana ofisialiny ho an'ny iPhone
Ny fampiharana ofisialin'ny tranonkala fanasokajiana malaza Milanuncios dia mipoitra amin'ny iPhone ihany
Ireo no fehin-kevitrao rehefa afaka andro maromaro miaraka amin'ny iOS 9
Andro maromaro taorian'ny nametrahako sy niaretako ny iOS 9 dia izao no fehin-kevitrao momba ny asany sy ny fahamarinan-toerana.
iOS 9 dia hamonjy bateria ary azo apetraka amin'ny iPhone 4S
Miaraka amin'ny iOS 9 dia hisy ny fanatsarana ny fanjifana bateria hatramin'ny fampiasana adiny iray, hiaraka amin'ny fomba fitehirizana bateria ihany koa izy io.
iOS 9 dia miaraka amin'ny vaovao: nihatsara be i Siri sy Spotlight
Ireo no vaovao voalohany izay entin'ny iOS 9 ho antsika, miaraka amin'ny Siri sy Spotlight ho fanovozan-kevitra.
Izany no miandry antsika ao amin'ny WWDC 15 rahampitso
Ao amin'ny iPhone News dia hanome famintinana fohy momba izay miandry anay izahay mandritra ity WWDC 15 ity izay hanomboka rahampitso.
Ny fahombiazan'ireo doka tena sahisahy ireo dia mbola tsy voaporofo, saingy Samsung dia tsy saro-kenatra amin'ny fitsikerana ny iPhone amin'ny doka nataony.
Ny iPhone dia tsy azo vidiana amin'ny fifanarahana amin'ny AT&T intsony
Tsy afaka mividy iPhone amin'ny fifanarahana amin'ny AT&T intsony ny mpanjifa amerikana izay nampifandray azy ireo hatramin'ny roa taona. Izao dia ho isam-bolana.
CustomNotificationSound dia mamela anao hanamboatra fampandrenesana
Tonga izany noho ny Jailbreak CustomNotificationSound izay hahafahantsika manamboatra ny feon'ny fampandrenesana isaky ny fampiharana an'ny antoko fahatelo.
HomeKit: ny valin'ny fanontanianao rehetra tokony ho fantatrao
Ny fampisehoana Homekit dia nahatonga anay nanonofy momba ny zavatra Internet sy ny fampiharana azy amin'ny fiainana andavanandro. Androany dia voavahanay avokoa ny fisalasalanao momba ity teknolojia ity.
Elgato sy iHome dia manolotra ny tolo-keviny voalohany ho an'ny HomeKit
Elgato sy iHome dia manolotra ny tolo-kevitr'izy ireo ho an'ny HomeKit. Ny sasany amin'ireo sensor ho an'ny tontolo iainana sy adaptatera hampavitrika / hanafoanana ireo fitaovana no heviny.
Apple patanty EarPods afaka mamantatra mpampiasa samihafa
Ny patanty Apple dia manambara EarPods mahaliana sasany izay afaka mamantatra hoe iza no mpampiasa mampiasa azy ireo
Patendry tokoa ny typo typo
Samy nanaiky ny hampitsahatra ireo keyboard keyboard ireo ny orinasa roa tonta.
Wozniak dia manazava ny tena maha samy hafa an'i Steve Jobs sy Bill Gates
Nanazava i Steve Wozniak tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny fantsona American National Geographic ny mahasamihafa an'i Steve Jobs sy ny vavahady Bill
Nanambara i Shazam fa te hanatsara ny fitaovany hahafantatra zavatra betsaka kokoa noho ny mozika izy. Ankehitriny dia manome anao fampahalalana momba ny boky, magazine ary ny vokatra.
Ny fampiharana Twitter an'ny antoko fahatelo dia hampiseho bitsika voatonona 'marina' ihany koa.
Ny fanavaozana ao amin'ny Twitter API dia ahafahan'ny rindranasa antoko fahatelo maneho ireo bitsika voatanisa ireo araka ny tokony ho izy amin'ny fampiharana ofisialy
Apple nahazo patanty ho an'ny kisary iOS 7/8 App Store sy Siri
Vao tsy ela akory izay i Apple dia nahazo patanty hiarovana ny iOS 7 sy ny iOS 8 App Store ary ny sarin'i Siri amin'ny plagiarism.
Tsy efijery feno amin'ny iPad intsony ny YouTube
Toa manohy "manasa" anay i Google hampiasa ny fampiharana azy ireo hankafizany ny serivisin'izy ireo 100%. Raha efa nanao ...
Efa vonona ny processeur iPhone 10 A7
TSMC dia efa manomana ny processeur A10, izay antenaina hapetraka miaraka amin'ny iPhone 7 amin'ny 2016 ho fanandramana hamerina ny fahatokisan'i Apple.
Ho avy ny emoji vaovao amin'ny taona 2016. Misy olona miloka ve fa ho tonga ilay manana rantsantanana afovoany?
Toa ho tonga ny emoji vaovao amin'ny taona 2016, efa ao amin'ny iOS 9. Anisan'ireo tolo-kevitr'ireo mpampiasa manasongadina ilay lehilahy mandihy na ilay vehivavy bevohoka
iOS sy Android, ahoana no hisafidianana?
Ao amin'ny Actualidad iPhone dia hasongadinay ireo teboka tsara amin'ny rafitra tsirairay mba samy hanome lanja ny tsirairay avy arakaraka ny filany na ny mahasoa azy ireo.
Quetzalcoatl, piozila tsotra nefa tsy mitovy
Quetzalcoatl dia manolotra lalao mampihomehy antsika amin'ny ambaratonga 180 izay tena fanamby
Nanavao ny fifanarahana nifanaovany tamin'i TomTom i Apple ary hanohy hampiasa ny vaovao avy amin'ity farany ho an'ny sari-taniny manokana. Tsy fantatra ny faharetan'ny fifanarahana.
Barack Obama no nanoratra ny bitsika voalohany an'ny kaontiny manokana avy amin'ny iPhone
Barack Obama, filohan'i Etazonia, dia nanangana kaonty twitter manokana ary maminavina hoe inona no nanoratany ilay bitsika? Eny, miaraka amin'ny iPhone
Atolotray anao ny emoji mihetsika 153 an'ny Apple Watch amin'ny GIF mba hahafahanao mampiasa azy ireo amin'ny fitaovana sy amin'ny tambajotra sosialy.
Halo Back dia mitondra ny bokotra "miverina" amin'ny iPhone
Misaotra an'i Halo Back dia hanana bokotra miverina virtoaly isika amin'ny haavon'ny ankihiben-tanana eo akaikin'ny ankavanan'ny bokotra Home.
Vox, solon'ny iTunes, mandefa ny Loop: serivisy fitahirizana rahona
Vox, iray amin'ireo mpilalao safidy tsara indrindra ao amin'ny Mac App Store, mandefa ny Loop: serivisy fitehirizana mozika ao anaty rahona.
iOS 9, be resaka momba ny tsy misy
Ny iOS 8 betas dia tonga hatrany amintsika amin'ny alàlan'ny satroka iray, miaraka amin'ireo fiasa izay tsy azo jerena satria tsy mahomby amin'ny besinimaro.
Ahoana ny fihetsiky ny ankizy amin'ny fisian'ny Apple Watch eny an-tànany voalohany? [video]
Manandrana Apple Watch voalohany ireto ankizy ireto ... Ary izao no fihetsik'izy ireo.
Ny iPhone 6 dia mandratra an'i Samsung hatrany
Samsung Electronics dia nitatitra tombony $ 4.350 miliara. Maneho fihenan'ny 39% izany tamin'ny taona lasa.
Periscope dia havaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana ny tantaran'ny famoahana
Nahazo fanavaozana vao tsy ela akory izay i Periscope izay ahafahan'ny mpampiasa mijery ny tantara an-tsary nandritra ny 24 ora farany.
Fehiny voalohany momba ny antso WhatsApp
Ny serivisy fiantsoana VoIP andrasana indrindra dia nahatratra ny fitaovana finday rehetra indray mandeha ary ho an'ireo ary ireo no fehin-kevitrao.
iOS 8.3 dia mametra ny fidirana amin'ny fahatsiarovan'ny iPhone
Ny iOS 8.3 dia mametra ny fidirana amin'ny fahatsiarovan'ny iPhone, tsy mamela antsika hiditra ao anaty lahatahiry fahatsiarovan-tena ary mametra ny fidirana.
Couria ho an'ny iOS 8 dia misy ao amin'ny Cydia izao
Ny kinova farany sy farany an'ny Couria ho an'ny iOS 8 dia azo alaina ao amin'ny Cydia maimaimpoana ary mitondra fiasa vaovao.
Voamarina, manatsara ny batterie iPhone ny iOS 8.3
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazaiko aminao ireo ohatra toy ny iOS 8.3 manatsara ny bateria miaraka amin'ny statistika kendrena.
Ny Nutshell dia mamela anao hanao horonantsary fohy tena izy
Amin'ny Nutshell ianao dia afaka mamorona horonan-tsary mahatalanjona zaraina amin'ny tambajotra sosialy
Xiaomi dia mandefa ny Mi Smart Scale, lanja mavesatra
Xiaomi dia nanambara ny Mi Smart Scale vaovao, lanja mavesatra miaraka amin'ny vidiny tsy mampino $ 15.
IPhone 6 dia mampiseho fampisehoana sary tsaratsara kokoa noho ny Galaxy S6
Taorian'ny famakafakana, ny iPhone 6 dia mampiseho fampisehoana sary tsaratsara kokoa noho ny Samsung Galaxy S6, lazainay aminao ny lakile sy ny angona rehetra.
Carrefour manavao ny app My Carrefour miaraka amin'ny fahombiazana lehibe
Carrefour manavao ny app My Carrefour ary mahatonga azy ho mahafinaritra ho an'ireo rehetra mitsidika ity supermarket ity
Todoist, mpitantana asa tena mahaliana
Miaraka amin'ny Todoist dia ho eo am-pelatananao izay rehetra ilainao hitantanana tsara isan'andro ny andro
Ny mpandrindra Roystan Ross ao amin'ny bilaoginy dia nampiseho ny fomba fampandehanana Super Mario 64 amin'ny iOS amin'ny alàlan'ny browser sy Web Unity Player.
iOS 8, enim-bolana taty aoriana dia izao no fehin-tsika
Efa enim-bolana mahery izay no namoahan'ny Apple iOS 8 marobe ary izao no fehin-kevitray.
iOS 8.3 dia mamela anao misintona atiny maimaimpoana avy amin'ny App Store tsy misy teny miafina
iOS 8.3 dia mitondra fiasa vaovao, eo amin'izy ireo dia ahafahanao misintona atiny maimaimpoana avy amin'ny App Store tsy misy teny miafina.
Enlight, ilay fampiharana vaovao momba ny fanovana sary amin'ny iPhone
Ny enlight dia manan-kery haka ny seza fiandrianana eo amin'ny tsena efa niady mafy ho an'ireo fampiharana fanovana sary
Asehonay anao ny rindranasa tsara indrindra hanaraka sy hahita ny raikipohy 1 amin'ny iPhone sy iPad-nao
Zavatra 11 ataon'ny Apple Watch ary tsy ataon'ny Android Wear
Androany ao amin'ny Actualidad iPhone dia manasongadina zavatra iraika ambin'ny folo izay ataon'ny Apple Watch isika ary tsy ataon'ny Android Wear.
Poll ny herinandro: MacBook habakabaka, volamena na volafotsy MacBook?
Inona ny loko tianao indrindra amin'ny MacBook?
Noraràn'ny WhatsApp mandritra ny androm-piainany ireo mpampiasa mpanjifa antoko fahatelo, fepetra somary henjana.
Fampitahana: Samsung Galaxy S6 vs iPhone 6 Plus
Izahay dia mitondra anao ny fampitahana henjana indrindra eo amin'ny Samsung Galaxy S6 sy ny iPhone 6 Plus
Golden Manager, lalao mahaliana iray izay mila fanatsarana betsaka
Golden Manager dia mamela anao hametraka ny tenanao amin'ny kiraron'ny lehiben'ny fanatanjahantena amin'ny ekipa baolina kitra
Combat Modern 5: sary pirinty latsaky ny Euro
Afaka mahazo Modern Combat 5 ianao latsaky ny euro, tolotra tsy azo lavina ho an'ny mpitifitra epic
Vitastiq, ny akanjonay iPhone manao dokotera
VitaStiq dia mamela ny iPhone handrefesanao ny haavon'ny vitamina sy mineraly amin'ny fomba tsy miditra an-tsokosoko ary tsy misy fanaintainana mihitsy $ 99.
Izy ireo dia manome vola iPhone 6 Plus amin'ny microwave
Izahay dia manamarina izay hitranga raha mihaino iWave isika ary mametraka ny iPhone ao anaty microwave miandrasa ny famahanana ny bateria.
Miaraka amin'i Stormy dia afaka mamoaka bitsika maro ianao amin'ny fomba tsotra sy tsy misy fahasarotana
Mahazoa bateria ivelany iPow 3200 maimaimpoana handoavana ny iPhone na ny iPad na aiza na aiza noho ny fahaizany 3.200 mAh. Mandraisa anjara amin'ny raffle.
Natalie Portman dia tsy ho ao amin'ny biopic Steve Jobs
Ny mpilalao sarimihetsika Natalie Portman dia tsy ho mpilalao sarimihetsika vehivavy loha-laharana amin'ny sarimihetsika Steve Jobs bionic. Universal dia tsy namoaka fanambarana manazava izany.
Tranga ofisialy Apple ho an'ireo iPhone vaovao misy fihenam-bidy 15%
Androany dia azonao atao ny mividy ireo tranga Apple vaovao ho an'ny iPhones 6 sy 6 miampy fihenam-bidy 15% amin'ny vidiny tany am-boalohany.
Apple dia manohy manasonia ny iOS 8.1, azo atao ny mampihena
Ahoana ny fomba hampihenana ny iOS 8.1 amin'ny iPhone na iPad aorian'ny fanavaozana ny iOS 8.1.1 na ny iOS 8.2 beta ary amin'izany dia afaka mamaky jailbreak Pangu tsy miverina.
Fa maninona ny iPhone misy RAM 1GB no mahomby kokoa noho ny hafa amin'ny Android?
Noho ny tsy fitovian'ny rafitra fiasan'ny iOS sy Android. Ity farany dia manao fanjifana RAM be loatra, manimba ny asany.
Misintona sary mihetsika 141 ho an'ny iPhone na iPad anao
Misintona sary miisa 141 ho an'ny iPhone 6 sy iPad miorina amin'ny Material Design, ilay interface vaovao an'ny Android 5.0 Lollypop
Ny maody maizina an'ny Eclipse 2 tweak dia manampy fanohanana ny iOS 8 sy ny iOS 8.1
Na dia ny Eclipse 2 aza dia iray amin'ireo tweak fanta-daza indrindra ahafahantsika mandray soa avy amin'ny fanamboarana ny iPhone, tsy nahazo fanohanana ho an'ny iOS 8 sy iOS 8.1 izy io.
Ovay ho lasa fakan-tsary lavitra ny iPhone-nao
Ny rindrambaiko Videography dia manova ny iphone-nao ho fakan-tsary lavitra, izay azonao fehezina amin'ny tranonkala rehetra, ahafahanao manitsy ny zoom, ny fivoahana sns.
Azo alaina izao ny Cydia 1.1.16, hahafahanao mametraka ity fanavaozana ity
Cydia 1.1.16 ho an'ny iOS 8 jailbreak dia misy izao hanamboarana lesoka rehefa mamerina amin'ny laoniny.
Ny famoahana ny vokatra Apple dia fintinina ao anaty afisy
Afisy lehibe mamintina ny fandaharam-potoana famoahana ny vokatra Apple rehetra, ao anatin'izany ny iPhone 6, iPad Air 2, iMac Retina 5k, ary ny Watch.
WhatsApp, tantara mitovy amin'ireo fandefasana Apple vaovao rehetra
Ny WhatsApp dia tsy mijanona mandiso fanantenana amin'ny resaka fampifanarahana azy amin'ny vaovao Apple ary mbola tsy manohana ireo iPhone farany farany
AMPY, avereno indray ny fitaovana ampiasainao amin'ny hetsiky ny tenanao manokana
AMPY dia bateria ivelany ho an'ny fitaovanao finday izay mameno ny hetsika nataonao
Ny iPhone 6 dia tsy tantera-drano, fa mahazaka azy kosa
Lahatsary iray no mizaha ny fanoherana ireo iPhones vaovao anaty rano, na dia tsy misy tantera-drano aza ny iray amin'izy ireo.
Ny Samsung Galaxy S4 dia mivalona amin'ny tanana ihany koa
Mampiseho ny horonantsary iray fa ny Samsung Galaxy S4 dia mivalona ihany koa amin'ny alàlan'ny tànantsika ihany.
Ny sary nangalarin'ireo olo-malaza ao amin'ny iCloud dia mety vokatry ny fianjerana tao amin'ny Find my iPhone
Ao ambadiky ny vaovaon'ny andro, izay mandeha erak'izao tontolo izao, mety misy bibikely ao amin'ny Find my iPhone izay mamela ny hackers hiditra amin'ny iCloud.
Hevitra roa momba ny mety ho any ambadiky ny iPhone 6
Ny mpamorona Martin Hajek dia manolotra antsika hevitra sasany tena mahaliana momba ny iPhone 6, amin'ity indray mitoraka ity dia mampiseho safidy roa azo atao any aoriana
Ny fanapahan-kevitry ny iPhone 6 dia mety ho 1334 x 750 ary 2208 x 1242 teboka
Ireo maodely roa an'ny iPhone 6 izay hatolotr'i Apple dia hanana ny fanapaha-kevitra 1334 x 750 ho an'ny 4,7 "ary ny vahaolana 2208 x 1242 ho an'ny 5,5".
Apple dia manala ny simika roa mampidi-doza amin'ny zavamaniry famokarana iPhone
Apple dia nanapa-kevitra ny hanaisotra ireo benzena simika sy n-hexane amin'ny tsipika fivorian'ny iPhone izay mety hampidi-doza, na dia karsinogenika aza.
Hevitra vaovao tsy mampino momba ny fonosana iPhone 6
Ity no boaty mety indrindra handehanan'ny iPhone 6 arak'ity mpamorona ity, izay mitondra antsika hevitra mahaliana momba ireo kaontenera manokana ireo.
Fanavaozana ny fampiharana Yahoo Weather miaraka amin'ny fampandrenesana isan'andro
Nahazo fanavaozana vaovao ny fampiharana Yahoo Weather izay ahafahantsika mahazo fampandrenesana roa isan'andro momba ny toetr'andro eo an-toerana.
Mihetsika, ilay fampiharana izay milaza aminao ny habetsaky ny fivezivezenao
Ny fomba fiaina maoderina (sy ny anton-javatra hafa) dia nihena tsikelikely ny fampihetseham-batana ary nampitombo ny fiainana ...
Ilay ringtone fantatra amin'ny hoe '' Aperture '', izay azontsika jerena amin'ny iPhones rehetra miaraka amin'ny iOS 7, amin'ny remix.
Ahoana no fomba hanatsarana ny Apple ny keyboard amin'ny iOS 8
Ny keyboard iOS 8 dia azo hatsaraina ary ny key key dia iray amin'ireo fanatsarana tokony hampiharin'i Apple amin'ny fanavaozana amin'ny ho avy.
Asehoy mivantana ny sarinao avy amin'ny iPhone miaraka amin'i Mimento
Mimento dia mamela anao hampivelatra ny sarinao am-pitoniana, avy amin'ny iPhone, ary mandray azy ireo any an-trano miaraka amin'ny vidin'ny fandefasana.
Ny fiambenana tsara indrindra ho an'ny Pebble (II) anao
Fanangonana efijery 7 ho an'ny famantaranandro Pebble.
Sintomy ny sary WWDC 2014 ho an'ny iPhone na iPad anao
Sintomy ny sary mivalona WWDC 2014 an'ny Apple ho an'ny iPhone, iPad, iPod Touch
Ilay sambo goavambe (yacht iray metatra 78 metatra) izay naorin'i Steve Jobs dia hita izao tao amin'ny seranana any Mexico.
Ny 5Gb iPhone 8c dia manome fahaiza-manao maimaim-poana 5Gb, ho an'ny 8,5Gb atolotry ny 4Gb Galaxy S16.
Rohy fampidinana IOS 7.1 ho an'ny fitaovana rehetra
Atolotray anao ny rohy fampidinana mivantana ny kinova iOS 7.1 vaovao ho an'ny fitaovana rehetra mifanentana.
Ny fiambenana tsara indrindra ho an'ny Pebble anao
Nisafidy efitrano fiambenana efatra tsara indrindra izahay izay azonao ampidirina amin'ny Pebble anao
CleverPin dia hamela antsika hampiasa ny kaody hidin-trano raha tsy ilaintsika (Cydia)
Ity tweak ity dia hahafahantsika manafoana sy mampandeha ny kaody hidin-trano araka izay itiavany azy noho ireo safidy atolotra antsika.
Ny fofon'ny Mac vao misokatra, natao menaka manitra
Marina izany, ny orinasa frantsay iray dia asaina mamorona hanitra manitra toy ny MacBook Pro vaovao.
Saurik dia mamaly ny fanontanian'ireo mpampiasa maro momba ny tweaks Cydia napetrany tao amin'ny fitaovany
LaCie Fuel, 1TB Wireless Hard Drive ho an'ny iPhone
Manampia fahaiza-manao 1TB ho an'ny iOS sy miaraka amin'ny mifanentana amin'ny AirPlay afaka mamindra mora foana ny sarimihetsika amin'ny efijery lehibe amin'ny alàlan'ny Apple TV.
SmartWatch + manararaotra ny mety ho Pebble anao
SmartWatch +, azo jerena ao amin'ny App Store, dia manolotra fahafaha-manao betsaka ho an'ireo mpampiasa Pebble.
Tsy ny mpanjifa an'i Apple intsony no mpanjifa afa-po indrindra
Ny mpanjifa Apple no tsy afa-po indrindra. Ny fanadihadiana iray an'ny Forrester dia manondro fa Samsung, Microsoft ary Sony dia nihoatra ny Apple tamin'ny fahafaham-po ny mpanjifa tamin'ny fanadihadiana natao tamin'ny 2014.
Mialà bebe kokoa amin'ny Pebble anao misaotra an'i Cydia
Asehonay anao ny rindranasa Cydia telo izay tena ilaina tokoa ho an'ireo izay manana smartwatch Pebble
Polaroid dia manolotra ny fakantsary XS100i hetsika vaovao
Famaritana avo lenta, WiFi, fihodinan'ny mandeha ho azy, solomaso zoro tsy misy rano na somary malalaka. Ireo fakantsary vaovao dia natao ho an'ny atleta sy ireo mpankafy hetsika.
JUMP, angamba ny charger paosy tsara indrindra ho an'ny iPhone
Avy amin'ny Kickstarter dia mahazo vokatra vaovao amin'ny anaran'ny JUMP isika, izay ahafahantsika mameno ny fitaovantsika amin'ny lafiny kely.
Ahoana ny fomba fanomezana fanomezana iPhone tsy ampoizina [hatsikana]
Androany izahay manome anao fomba hafahafa hanafina iPhone amin'ny fanomezana hafa mba hahagaga ny mpandray azy.
Whited00r dia mitondra ny iOS 7 ho an'ny fitaovana taloha
Whited00r dia manome anao fahafaha-mankafy ny hatsarana sy ny asan'ny iOS 7 amin'ny iPhone taloha
Unlimtones, misintona Ringtones na SMS avy amin'ny iPhone (Cydia)
Unlimtones, ilay rindranasa ahafahanao misintona ny feo na ringtone na SMS, dia efa mifanaraka amin'ny iOS 7. Azo alaina amin'ny Cydia.
Vaksiny, ny fampahalalana rehetra amin'ny iPhone sy iPad-nao
Ny vaksinina dia fampiharana vaovao ho an'ny besinimaro sy ny mpitsabo amin'ny fahasalamana miaraka amin'ny fampahalalana rehetra momba ny vaksininy
MiPow Power Tube 2600, charger azo entina miaraka amin'ny fifandraisana Lightning
Ny MiPow Power Tube 2600 dia manome ny fahafaha-mameno tanteraka ny fitaovanao amin'ny habe tena voafintina ary tsy mila tariby.
Raha ny momba ny fanohanana ireo fitaovana taloha, iOS dia mamafa ny Android
Mazava ny fahasamihafana misy eo amin'ireo fanavaozana rindrambaiko azon'ireo fitaovana Android sy ireo raisin'ireo fitaovana iOS, ary hita taratra tanteraka amin'ity sary ity.
Ny fivoaran'ny iPhone amin'ny sary
Asehontsika ny fiovan'ny iPhones samihafa nandritra ny taona maro tamin'ny sary
Ny iPhone 6 dia mety ho phablet 5-inch
Ny iPhone 6 manaraka dia mety ho phablet, smartphone miaraka amin'ny haben'ny efijery hatramin'ny 5 santimetatra
Izany no antony mahatonga ny accelerometer an'ny iPhone 5s hiasa mafy
Speedometer IPhone 5s hita ho orinasa hafa no manamboatra azy fa tsy iPhone 5
Ny iPhone dia mbola vokatra manerantany rehefa mijanona tsy ho toy izany i Samsung
Nanapa-kevitra ny hametra ny fahafahan'ny mpanjifany manova kaontinanta i Samsung, manakana azy ireo tsy hampiasa ny fitaovany any amin'ny toerana vahiny.
Ny hevitro: ny iPhone 5C dia misy dikany betsaka ho an'i Apple
Ny iPhone 5C angamba no fandefasana ara-bola tsara indrindra an'i Apple tao anatin'ny taona vitsivitsy.
Ny tapakila Renfe dia efa mifanaraka amin'ny Passbook
Ny orinasam-pitaterana lamasinina, Renfe, dia efa manana ny mifanentana amin'ny fampiharana Apple Passbook rehefa mampiditra tapakila hividianana azy io.
iOSFonts.com, tranonkala iray mampiaraka ny endritsoratra ampiasaina amin'ny iOS
iOS Fonts dia pejy iray manangona ny endritsoratra rehetra hita ao amin'ny iOS mandritra ny taona maro hampiasa azy ireo amin'ny famolavolana tranonkala na rindranasa.
Raverle 3 kopian'ny Pradium, boky mifandraika amin'ny Prado Museum
Pradium, ny boky mifandraika amin'ny Prado Museum dia asa tena tsara izay hahasarika ireo tia zavakanto izay te-hitsidika virtoaly ny tranombakoka
Fanavakavahana sy hevitra diso momba ny iOS
Rehefa miresaka momba ny iOS sy Android, ny zavatra mora indrindra dia ny miditra ao amin'ny klika ary mitsikera ny sehatra mifanohitra amin'ny hevi-diso.
Ny iPhone 5 sy ny Galaxy S4 dia mifanatrika mifanatrika amin'ireo maodely 3D izay ahafahantsika mahita ny maha samy hafa azy amin'ny antsipiriany
Taratasy Vs iPad, rehefa tsy misy fampiharana amin'ny zavatra rehetra (Hehy)
Nandefa fanentanana dokam-barotra antsoina hoe Paper vs iPad ry zareo, izay manao fomba mahatsikaiky izay indraindray tsy mahavonjy antsika amin'ny zavatra rehetra ny iPad.
Waze, ilay mpitety GPS maimaim-poana, novaina ho amin'ny andiany 3.6
Waze ho an'ny iPhone sy iPad dia novaina ho an'ny andiany 3.6 hanampiana fampiasa vaovao, hanatsara ny fahombiazana ary hanamboarana bibikely.
Notsapainay ny monitor ny tahan'ny fo Runtastic Smart Combo amin'ny Bluetooth 4.0
Notsapainay ny fehin-tratra Runtastic Smart Combo, mifanaraka amin'ny Bluetooth 4.0 sy ny hafatrana 5,3Khz mamela antsika handrefy ny fitepon'ny fony.
Campus vaovao Apple: airtight tanteraka
Poll of the Week: iPhone 5 mainty na fotsy?
CamTime: ampio fameram-potoana amin'ny fakan-tsary iPhone (Cydia)
Tranga fanovana loko mpandresy ho an'ny iPhone 4 / 4S
Mpandresy ny fanovana loko ny tranga ho an'ny iPhone 4 / 4S izay ampiasainay miaraka amin'ny fivarotana kojakoja AlertiPhone.com
Boky vaovao natokana ho an'ny Asa: 'Iza i Steve Jobs?'
Ampiasao ny charger iPad anao ... hanokatra tavoahangy labiera
Iray amin'ireo fampiasana tsy ho tonga tamiko io, fa ny tena marina dia ...
Ny varotra mpangalatra mangalatra iPhones
Ny politikan'ny fiantohana an'i Apple any amin'ny firenena toa an'i Etazonia dia misokatra be. Alohan'ny olana hitanao ao ...
"Mapple" sy "Springface", mpihetsiketsika tanteraka ao amin'ny The Simpsons (Humor)
Tsy vao sambany ny The Simpsons no manangona ny fahombiazan'i Apple amin'ny fizarana iray, na amin'ity tranga ity, ...
Fanadihadiana mandritra ny herinandro: Inona ireo mpilalao mozika ampiasanao matetika amin'ny iPhone na iPod?
Hiverina herinandro iray indray isika miaraka amin'ny iray amin'ireo fizarana ao amin'ny Podcast anay: ny fanadihadiana amin'ny herinandro. Amin'ity indray mitoraka ity ...
LockLauncher: ampio kisary fidirana haingam-pandeha amin'ny efijery hidinao (Cydia)
LockLauncher dia hanampy sary miisa 9 ao amin'ny efijery hidinao mba hahafahanao miditra haingana amin'ireo rindranonao ...
GrowlNotifier: mandefasa fampandrenesana avy amin'ny iPhone amin'ny Mac na windows (Cydia)
GrowlNotifier dia handefa any amin'ny Mac anao ny fampandrenesana tonga amin'ny iPhone anao, ary ho hitanao izany miaraka amin'ny fampiharana Growl izay…
IPhone 4 / 4S Photoshop Templates ho an'ny Developers
Raha mpamorona rindranasa na mpamorona iPhone ianao dia mety ho liana amin'ireo maodely Photoshop ao amin'ny ...
IPhone 4S dia manana mpandahateny tsara kokoa noho ny iPhone 4
Amin'ity fampitahana nataon'izy ireo tamin'ny iDownloadblog ity dia hitantsika fa ny iPhone 4S dia tsy vitan'ny hoe manana processeur sy ...
Siri Inona ny telefaona tsara indrindra?
Efa fantatsika fa i Siri dia manana valiny amin'ny zava-drehetra, ary ny sasany dia tena mahatsikaiky, inona no dikan'ny fiainana? ...
Inona no nianjera indrindra tamin'ny iPhone?
Actualidad iPhone dia efa manomana ny podcast manaraka ary mitady tantara vaovao avy amin'ny mpamaky izahay. Amin'ity fotoana ity dia te hahalala ...
New Dock Cable - RS-232 (Serial Port)
Marina fa ny sasany, indrindra ny faralahy, dia tsy hahafantatra fa seranana seranana io, na dia misy aza ...
iFinder: ny solon'ny iFile (Cydia)
iFinder dia mpikaroka rakitra rakitra ho an'ny iOS. Zavatra mitovy amin'ny iFile fa misy fampiasa vaovao (management ...
XtremeMac dia manolotra kojakoja roa hihainoana ny mozika tsy misy tariby ao an-trano na ao anaty fiara
Ny orinasa XtremeMac androany dia nanambara vokatra vaovao roa mikendry ny hanolotra ny fahafaha-mihaino ny mozika ao anaty ...
Ny repo an'ny Team GPS an'ny GPS dia misy izao
Ny GPS iPhone Team repo dia efa misy ankehitriny, ekipa nanomana fitoeram-bola ao Cydia ahafahanao ...
Ny farany avy amin'ny "South Park" dia manao parodies ny farany avy amin'i Apple
Omaly dia navotsotra tany Etazonia ny vanim-potoana vaovao "South Park" ary Apple dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny ...
Vaovao Mamaly iPhone
Ao amin'ny Actualidad iPhone dia miahy ireo mpamaky izahay, mba hahafahanao manontany anay ny fanontanianao momba ny iPhone: Cydia, Jailbreak, ...
Tranonkala mahafinaritra no manangona ireo hafatra tsy takatry ny saina amin'ny alàlan'ny fanitsiana mandeha ho azy ny iPhone [Mahatalanjona]
Mandika ny sary: ​​-Misaraka izahay sy ny reninao amin'ny volana ambony. -Inona??? ! Fa maninona! Miantso ahy azafady! -Nanoratra aho ...
Tsy fitoviana: fizarana Mac Os + Dropbox + Internet.
Taorian'ny tolona be dia be dia hitako ihany ny olako farany, ka andao lazaina amin'ny ...
Jiro LED Wi-Fi + iOS App = iParty
Ny kitapo maivana iGLO LED dia misy tadiny 5 metatra ny halavany vita miaraka amina total ...
Fizarana vaovao ao amin'ny App Store: «Fampiasa fiteny, fitsipi-pitenenana ary voambolana»
Fizarana vaovao ao amin'ny App Store natokana ho an'ny fiteny. Ao no ahitantsika ny fitambarana diksionera sy ny fampiharana tsara indrindra ...
Avadiho ho lasa fanaraha-maso lavitra manerantany ny iPhone-nao
Ataovy miavaka ny feon'ny SMS iPhone
Androany no entiko aminao ity fampianarana ity izay ahafahanao manova ny feon'ireo SMS izay entin'ny iPhone amin'ny ...
Ny 26% amin'ireo iPhone amidy dia manana fiainana latsaky ny 2 taona …… ..
Ny fandinihana nataon'ny mpamatsy fiantohana SquareTrade dia nahatsikaritra fa ny 26% amin'ireo iPhones rehetra dia simba ...
Tutorial: Jailbreak iOS 4.0 Final Version miaraka amin'ny RedSn0w (iPhone 3G IHANY)
Taorian'ny famoahana ny iOS 4.0, ny jailbreak miaraka amin'ny RedSn0w 9.5 b5 dia mifanaraka tanteraka amin'ny kinova farany ...
Bosch Power Box 360: rafi-peo tsara ho an'ny tontolo "manimba"
Raha tsy matetika no entinao mankany amin'ny toeram-piasanao ny iPhone-nao, satria tsy misy ny toe-javatra mety amin'ny tontolo iainana afaka ...
Ny iPhone 4 miaraka amin'ny kristaly Swarovski
Ny iPhone 4 dia mbola tsy navoaka teny an-tsena ary efa navoaka ny kinova izay hahatratra 1000 ...
Inona ireo lavaka ao amin'ny iPhone 4 fotsy?
Betsaka amintsika no somary gaga rehefa nahita lavaka vitsivitsy tao amin'ny tapany ambony amin'ilay iPhone fotsy vaovao. Eto…
Slacker Radio 2 mozika mivantana tsy misy fifandraisana Internet .. ..
Vaovao tsara ho an'ny mpampiasa an'ity fampiharana mahatalanjona ity ary mitranga amin'ny maro amintsika fa rehefa ...
Efa ho roa taona taorian'ny nanombohany Crash Bandicoot Nitro Kart 3D, nanapa-kevitra ny orinasa Activision fa hanome ny ...
Androany, Apple dia nanolotra ny rafitra fiasa vaovao ho an'ny sehatra iPhone, iPod Touch ary iPad. Nanomboka niresaka i Steve Jobs ...
Movistar no voatondro ho orinasa ratsy indrindra amin'ny taona
Tonga tao amin'ny vatako ny fanamaivanana, ary rehefa avy nanamarina tranga mihoatra ny indray mandeha io ...
Call of Aduty: Ady amin'ny ady - Zombies
Call of Duty: World in War - Tonga i Zombies ho an'ny iPhone / iPod Touch avy any Activision. Just…
IREB 3.1-3 ho an'ny Windows miaraka amin'ny 3.1 SHSH Grabber ho an'ny iPhone 3Gs
iH8sn0w dia namoaka ny kinova iREB ​​ho an'ny Windows. 3.1-3 ity fanavaozana ity ary ankoatry ny ...
Rakibolana - Newbie's Guide
Toro-lalana - FITORIANA NOVICE (sy TSY-MPITADADIKA)
Ny boaty izay andefasan'ny Apple SAT anao
Heveriko fa toy ny tamin'ny Xbox360 (izay tsy nandefa iray tany amin'ny SAT ...), Apple ...
Fanitsiana ny "Project Jailbreak"
Ity Post ity dia misy ny hevitro manokana izay manantena aho fa hanaja sy hifanakalo hevitra amin'ny fomba raisonnement ary tsy hampiasa fiteny diso…
CallClear, fampiharana hamafana antso an-tarobia tsirairay
CallClear, dia fampiharana izay nanova ny anarany tamin'ny volana martsa hatramin'ny talohan'ny niantsoana azy iCallBR ary izay ...
Tonga ny iPod Shuffle vaovao, kely noho ny hatramin'izay
Androany maraina dia nanidy ny magazay i Apple ary teny an-dàlana hiverina no nahitanay ny iPod Shuffle vaovao….
Lalao - Chop Sushi
Ny orinasa malaza THQ, mpamorona lalao video ho an'ny sehatra finday, dia namoaka lalao vao tsy ela izay nahagaga anay ...
Lalao - DanceDanceRevolution S Lite
DanceDanceRevolution Lite dia kinovan'ny lalao Konami Dance Dance Revolution fanta-daza. Ny zavatra tsara momba an'ity kinova ity dia ...
Misy fanavaozana Mac OS X Leopard 10.5.6
Vao nanolotra ny fanavaozana ny Mac OS X Leopard kinova 10.5.6 ho an'ny mpampiasa rehetra i Apple. Ny…
Lalao - MONOPOLY Eto & Ankehitriny: The World Edition
Ny ampihimamba, ity lalao filankevitry ny birao patanty ity tamin'ny 1935, voasoratra ao amin'ny Guinness Book of Records, dia manome isa efa ho 500 tapitrisa ...
Itunes, iPhone ary iPod: Ch. 1, K-tuin dia tsy Apple
Tamin'ny herinandro lasa teo dia nahazo vintana ratsy novidian'ny baterin'ny Macbook Pro tao ...
Fifaninanana Super Krismasy: mpandahateny, tranga, dock ary maro hafa
Araka ny efa nampanantenainay, tao amin'ny Actualidad iPhone dia manomana fifaninanana manokana ho an'ny Krismasy izahay. Voalohany indrindra, dia ...
Fampivoarana amin'ny iPhone (5): ny fampiharana voalohany (III)
Tao amin'ny lahatsoratray teo aloha dia nampidirinay ny Label, ny TextField ary ny Button ao amin'ny interface of our application. Tianay ...
Fampivoarana amin'ny iPhone (4): ny fampiharana voalohany (II) anay
Tao amin'ny lahatsoratray teo aloha dia nanondro izay ho toetranay HelloWorld application sy ny dingana hataonay ...
Fampivoarana amin'ny iPhone (2): fanomanana ny tontolo iainana
Tamin'ny lahatsoratray teo aloha dia niresaka momba ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny fampivelarana ny rindranasa tranonkala sy ny rindranasa zanatany ho an'ny iPhone. Ao…
Ny namana PS3 sy iPhone tsy afaka misaraka na mifandray ...
Ny famakiana izao maraina izao ireo gazety isan-karazany, ary nanao fanadihadihana ara-tantara ny vaovao, nangoniko ity manaraka ity avy amin'ny faritra El País.com ...
Fetsy sy hitsin-dàlana izay mety tsy fantatrao
Fantaro ny isa IMEIanao amin'ny alàlan'ny antso * # 06 # dia hahazo ny isa mampiavaka anao manerantany ianao. Fidirana mivantana mankany ...
Ahoana ny fomba hanaovana antso sandoka
Nampihomehy ahy ity programa ity, antsoina hoe Fakes Calls izy ary hanazava ny fandehany ... Manana ny ...
Very ny fandrakofana 3G?
Tao anatin'izay andro vitsy lasa izay (nanomboka ny alarobia-alakamisy tamin'ny herinandro lasa teo), izaho sy ny mpiara-miasa maromaro ary ...
Fiaretana IPhone 3G: inona no anaovana azy?
Nandritra ny andro maromaro izao, mpampiasa sasany no nitaraina (tsy tany Espana ihany) momba ny fanoherana ambany ny iPhone 3G. Trosa ny toky, noho izany dia nanangona izay hitako rehetra momba an'ity lohahevitra ity aho.
Fa maninona no maharitra ela ny fampifangaroana ny iphone-ko?
Misaotra ireo namantsika ao amin'ny iphonefan.com mahazo an'ity sary mahaliana ity izahay mba hahafantaranay ny antony ilan'ny iphone ela loatra ...
Soso-kevitra: lakilen'ny mailaka
Raha iray amin'ireo tompon'ny iPhone voalohany ianao ary tsy manana serivisy mailaka am-peo dia avelako ianao ...
Fiainana faharoa sy WOW avy amin'ny iPhone
Nandritra ny volana vitsivitsy dia niara-niasa i Intel sy Apple hahafahany mampiasa sehatra fialamboly roa amin'ny ...
Apple no marika ankafizin'ny homosexual
Voalohany indrindra, tsy napetrako teo fotsiny ny lohatenin'ity lahatsoratra ity satria, na hoe te hampahasosotra ny ...
Hetsika mihoatra ny 1000 ho an'ny iphone-nao ao anaty rakitra iray
Eny, eto ianao manana fonosana izay vao noforoniko tamin'ny wallpaper mihoatra ny 1000 ho an'ny iphone toa ...
Clone an'ny iPhone fa tsy telefaona fa MP4
Ny iPhone dia manana clone maro, na izany aza misy ifandraisany amin'ny telefaona finday fa tsy mpilalao ...
Java ho an'ny iPhone?
Araka ny fantatrao, ny tranokala Safari izay ampiasain'ny iPhone dia tsy manohana an'i Java na Flash, fetra tsy dia mahafinaritra amin'ny ...